Stefan Löfven oo ka fikaraya si looga hor tago naaziyiinta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ra´iisal wasaare Stefen Löfven. sawir: Tina MagnergÃ¥rd-Bjers/TT
Stefan Löfven oo ka fikaraya si looga hor tago naaziyiinta
Maxkamadda maamulka oo soo koobtey mudada ay mudaharaadayan ururka NMR.
La daabacay fredag 29 september 2017 kl 09.28
Reysal wasaare Stefan Löfven ayaa gudoominaya shir looga arrinsanayo sidii looga hortagi lahaa Naziyiinta raba in ay Göteborg mudaharaadyo ku dhigaan.
Mudaharaadka Naziyiintu sabtida ay ku qabsanayaan Göteborg ka hor ayaa reysal wasaare Stefan Löfven wuxuu u yeerey taliyaha ciidamada booliiska Dan Eliasson si mudaharaadka Naziyiinta loo joojiyo.
Reysal wasaare Löfven ayaa sidoo kale arrinkan dartiis wuxuu kulan la qaatey wasiirka arrimaha gudaha iyo caddaaladda Morgan Johansson.
Reysal wasaare Stefan Löfven oo arrinkaas ka hadlaya ayaa yiri:
- Dabcan mashaakil ayaa naga heysta magaalada Göteborg, waana in aan arrinkan si dhab ah ugu hawlgalnaa. Sharciyada dalkeena ka jiraa wey ku filan yihiin in looga hortago xoogagga noocaas oo kale ah. Haddii aan u baahano in aan sharciga wax ka badalnana waanu sameyneynaa si aan naziyiinta uga hortagno, ayuu yiri Stefan Löfven.
Maxkamadda sare ee maamulka ( Kammarrätten) ayaa go’aan ka soo saartey abiil uu ururka iska caabinta nordi-gu ka qaatey go’aan hore ee ay maxkamaddaasi ku xakameysey goobaha ururka NMR uu mudaharaadka ku mari karo iyo waliba waqtiga mudaharaadkaasi qaadanayo.
Maxkamadda ayaa go’aamisey in ay sii koobto waqtiga mudaharaadka ay dhigayaan ururka iska caabinta nordigu, waxayna maxkamaddu go’aamisey in mudaharaadkaas la soo gabagabeeyo saacaddu marka ay tahay saddexda galabnimo meesha markii horey ay ka aheyd in mudaharaadkaasi socdo ilaa iyo afarta galabnimo.
Guud ahaan magaalada Göteborg iyo gaar ahaan ciidamada amniga ayaa u diyaargaroobaya mudaharaadka ay ururka iska caabinta nordigu (NMR) ku marayaan maalinta bari ee sabtida qeyba ka mid ah wadooyinka Göteborg.
Ciidamada sirdoonka Sweden ee Säpo ayaa sheegey in sanadka soo socda ay dalkaan Sweden kor u kici doonaan dadka xubnaha firfircoon ka ah ururada xagjirka ah ee ay ka midka yihiin ururka iska caabinta nordigu.
Ahn-Za Hagström oo ka tirsan ciidamada sirdoonka Sweden ayaa iyadoo arrinkaan ka hadleysa waxay tiri sidan soo socota:
-Waxaan la soconaa in dhaqdhaqaaqyada xagjirka ahi hawlgaladooda ay kordhinayaan sanadka soo socda oo ah sanad dalkaan ay doorasho ka dhici doonto. Waxaanu ognahay in sanadka soo socda ay dhaqdhaqaaqyadooda kordhin doonaan ururada aaminsan sareynta dadka cadcad iyo kuwa kaloo la mid ah , ayey tiri Ahn-Za Hagström oo ka tirsan ciidamada sirdoonka Sweden.
Ciidamada sir doonka dalkaan ayaa aaminsan in Sweden ay xilligaan ku sugan yihiin ilaa iyo 3 000 oo qof oo aaminsan afkaarta naziga iyo xagjirnimada, taas oo kor u kac xoog lehi ku yimid maadaama dhowr sano ka hor ay dadkaas tiradoodu dhammeyd dhowr boqol oo qof kaliya.
Dadkaas xagjirka ah ayaa 2 000 oo ka mid ahi waxay yihiin islaamiyiin xagjir ah meesha inta kalee soo hartey ay yihiin kooxo xag jir ah oo aaminsan afkaaraha mintidnimo ee garabyada middigta iyo ka bidixda labadaba.